Izindaba - 2020 unyaka okhetheke kangaka, i-COVID-19 isakazeka emhlabeni wonke kusukela ekuqaleni konyaka
Ngokungalindelekile, u-2020 unyaka okhetheke kangaka, i-COVID-19 isakazeka emhlabeni wonke kusukela ekuqaleni konyaka. Bonke abantu baseShayina baphila umkhosi ojabulisayo wasentwasahlobo, bengadli ngaphandle noma bethenga ngaphandle, bengazi abangane noma bevakashele izihlobo. Kuhluke kakhulu kunakuqala！
Ngenxa kahulumeni waseChina, ukusabalala kwakulawulwa kahle, igxathu negxathu, izimboni zavulwa ngamunye ngamunye.
Besikhathazeke kakhulu lapho sisekhaya, ngoba sisayine iphrojekthi enkulu ngaphambi nje komkhosi wasentwasahlobo, nesikhathi esiqinile sokulethwa. Yize igciwane lilindelekile, asithandi ukufika sekwedlule isikhathi nganoma yisiphi isizathu. Ngakho-ke kusukela ngosuku esiqala ngalo ukusebenza, bonke abasebenzi basebenza kanzima ndawonye, ​​basebenza ngokweqile nsuku zonke, ukuze bathole isikhathi sokulethwa.
Ekugcineni, siqede inkatho yokuqala, ama-4pcs amadubhu alungele ukuthunyelwa. Bheka! Bahle kanjani! Yabelana ngokukhanya okusagolide, njengokuziqhenya kwabo bonke abasebenzi be-Stamina! Iklayenti lethu nalo lijabule kakhulu ukuzwa ngalo, umbiko we-QC ukhombisa ukuthi yonke imingcele ifanelekile, ingayithola ngenyanga eyodwa, kujabulisa kanjani! Kusekhona ama-50pcs okufanele aqedwe, futhi i-COVID-19 isasithonya, Abasebenzi bethu abanele, abasebenzi abaningi abakwazanga ukushiya amakhaya abo kusukela ngeholide ukugwema noma iyiphi ingozi. kepha sizethembile kakhulu, sakha ama-jigs asebenzayo ukwenza ukuhlangana okuphezulu, zonke izinqubo zibushelelezi futhi zinamakhono. Abasebenzi bethu abazizwa bekhathele yize besebenza ngokweqile nsuku zonke, inkampani nayo izama ngayo yonke indlela ukunika abasebenzi imvelo ethokomele kakhudlwana, nezitsha ezimnandi nekhefu lokuphuza kanye nokudla okulula.
Bheka futhi izigubhu eziphelele, azinasici. Liqine kangakanani iqembu! Inokwethenjelwa futhi isebenza kahle, kufanele ukwethenjwa!